Amabhayisikobho best ukusetha isimo. Uhlu amafilimu for ajabule
Ukukhuluma ngokuthi ubani yilokhu ama-movie ukusetha kwemizwa, ungakwazi ngiqale ngikuxoxele kancane mayelana izintandokazi zobudala obuhlukene nezigaba ubulili lababukeli.
Ngubani othanda ukuthi amabhayisikobho
amafilimu lesidze, adalwe cinema emhlabeni, abaningi. Le drama, amahlaya, isenzo, Thriller. Bazoya injabulo kusukela amasosha, abakubonisayo ngokwengqondo yena endaweni protagonist, ubani deftly elwisana ne izigcwelegcwele, ekhulumela ubulungiswa. Abesifazane ukubukela melodrama, lapho isabelo ngokuwa lokuqala sizi Heroine, kodwa ke isiphetho uvuza wakhe nge impindiselo. Ahlangana endleleni enhle, ecebile, indoda enhle, ngubani Yiqiniso, owayo uthandana naye.
Intsha Nama intsha engakwenqeni "bakitaza" izinzwa ngokwabo, ubukele Antics ka villain ku Thriller noma horror ngifuna. Ngokuvamile intsha abathanda ukubukela lezi amafilimu kule nkampani. Amabhayisikobho engcono ukusetha isimo ukuze abantu asebebadala - kuyinto melodrama comedy of 1950 - 1980. Ngalesi sikhathi izwe waya izikrini amabhayisikobho engcono, nakuba ziziningi, hhayi kuphela isizukulwane endala namanje yambheka enkulu.
amabhayisikobho Old, kunjengewayini, ngokuhamba kwesikhathi, babe ngcono nakakhulu
Wazisa ukuthi ifilimu ayokwenza up, ungaqala cishe kusukela ekuqaleni ebhayisikobho Soviet njengenhlangano movie kwezobuciko nje waqala ukuqopha. Yize izithombe esibukweni eziningi esifana magic. TV yayingekho, futhi abantu baya ebhayisikobho ukuze bajabule ngokwakho futhi abe insini.
Mayelana movie "buthule", lapho kwakungekho umsindo, awukwazi ukukhuluma manje ngoba bambalwa ukubukeka kwabo. Kodwa uma ufuna, ungaba insini, bheka, yeka sama-pretzel ubhalisele Charlie Chaplin e amahlaya akhe. Njengoba kwamafilimu isiRashiya, le Lyubov Orlova - unomphela ifilimu Heroine yaleyo minyaka - uye wadala eningi izindima ethakazelisa kakhulu. Ungakwazi ukubukela amabhayisikobho ukusetha isimo nge iqhaza lakhe.
Yiqiniso, "iVolga-iVolga", "Circus" nabanye. Ngemva nje kancane kwalokho, ekuqaleni kukhanye futhi Marina Ladynina wakhe "Kuban Cossacks" - ifilimu elikhanyayo isebenza zonke izinzwa. Le ifilimu is ebuswa ngemibala ocebile. Kuyamangalisa ukuthi cinema ka ngemva kwempi linezincazelo eziningi ezimibalabala. ngokushesha nesithakazelo konke - umdlalo abadlali ezinkulu, ngesakhiwo. Futhi indlela kahle sung Amaqhawe ifilimu, enabo, ngaphandle dubbing.
Gaidai - master olukhulu ahlekisayo
Ngakho kancane kancane sesifike kanye namahlaya ethelevishini Gaidai. Ngaphezu kwazo injabulo futhi uyahleka omdala nesizukulwane samanje. amabhayisikobho akhe aziwa ukuphakamisa isimo kwabaningi. Kuyathakazelisa sokulandela ukuzidela protagonist, ngifuna "izandla Brilliant". Le filimu "Prisoner of eCaucasus" futhi kuyakha. Sekuyisikhathi eside imishwana Abaningi lokhu kanye nezinye amabhayisikobho akhe kwaba cruise. Babé ingxenye abantu. Ngezinye izikhathi zingu ngaphandle ngisho ukucabanga, lapho la magama.
Mayelana ezamehlela Shurik ungafunda ngokubuka ifilimu kwegama elifanayo, kanye movie, uyaqhubeka le timu - "Ivan Vasilievich". Tsar Ivan Grozny, sibonga imishini yakhelwe Shurik, kwaba eMoscow cishe esikhathini sethu, futhi esigodlweni sakhe sifana kakhulu uSuperintendent yakhe. On the vicissitudes abalingiswa ungafunda by kokubuka le filimu.
Uma othile ekubuza: "Ukweluleka ifilimu ukusetha isimo," - ke ungakwazi ukukhuluma mayelana nale movie, inkosikazi iyakujabulela ukuba babukele. Njengomhlaba amafilimu Gaidai, lapho ukudlala Vitsin, Morgunov futhi Nikulin. Ngaphezu "eyisithunjwa Caucasian", "izandla Brilliant" baba izinkanyezi ku "Bootleggers", the film "Operation Y no Okunye Adventures Shurik".
Okuhle inganekwane - kubuye movie ukusetha isimo
Uma ufuna eziphonsa ezweni magic, ukubuka i-movie "Varvara ubuhle, eluka eside." indaba Good inganekwane "Jack Frost." Njengenjwayelo, uthandeka kanjani, intombazane abazikhandlayo evuzwa nokubi nokuhaha usulu futhi ajeziswe. Imisho kusukela "Frost" is Sekuyisikhathi eside i-cruise. Futhi manje, uma indodakazi yami naughty, kungenzeka okwamanje ukuyibiza ngokuthi "Marfushechkoy-darling," njengoba yayibizwa ngokuthi uhlamvu omubi lokhu indaba, ogama indima udlalwa ngokumangalisayo Inna Churikov.
isizukulwane iphakathi kwesizwe, kuyilapho ingane, bathandile ukubukela "okusha Adventures Masha kanye Viti." Le filimu, futhi, oziphakamisa kwemizwelo futhi igcwalise umphefumulo nge magic fabulous okwenzekayo ngokoqobo. Kuyefana nasendleleni movie "Snow Queen", okuyinto ezithakazelisayo ukubona wonke umndeni. Isiqubulo atamansha ukuthi uma izingane abalibali, ezinye zazo ngeke sikhule abaphangi Okuyınqo, kungaba ezihlekisayo ukusho maqondana nezinyathelo wenzalo yabo.
ibhayisikobho Ovelele "ababili, mina komthunzi + wami" futhi akakwazi ukuba athokozise. Lena-movie ezinhle mayelana namantombazane amabili ayefana kakhulu ushintshanisiwe kanjani futhi wasiza uyise omunye wabo ngahlangana owesifazane oziphethe kahle - uthisha ekhaya zezingane.
"Ukudansa Zokuzenzela" - futhi ifilimu emangalisayo. Uhlamvu main eyadlalwa Patrika Sueyzi dancer okukhulu, yena uyathandeka, kodwa engacebile. Ngolunye usuku nendlela yakhe ihlangabezana abasha, ngobuqotho futhi kancane intombazane funny kusuka lomkhaya ocebile. A enhle love story uyogcwalisa umphefumulo nge imizwelo eyakhayo futhi uthokoze.
Manje, futhi, kuningi uyakufanelekela Russian ifilimu imisebenzi. Kwamjabulisa amafilimu ezifana "Christmas Tree" nesithi "uthando eMzini". Kuze kube manje, esingu 3 ngamunye wala amafilimu. "Christmas Tree" - kungcono njalo indaba Christmas obonisa nabalingiswa abasemqoka - uSergei Svetlakova no-Ivan urgant. Ngaphandle kwalezi amafilimu udlala kanye nezinhlobonhlobo zezinye abadlali abaziwayo. Le movie ingabonwa yedwa, njengoba umbhangqwana noma yonke inkampani, kanye ifilimu "Uthando eMzini".
Ngaphandle nje kokuthi abadlali ethandwa, kwabonakala kakhulu futhi umculi filipp kirkorov, udlala Valentine. Ekuqaleni yena wayeyedwa, kodwa inxenye yesithathu, futhi, uthola uthando bakhe beqiniso. Amaqhawe main kufanele sibonise ubuqotho emizweni ayenayo ngama-ngesiwombe sesibili, kupela ukuthi ukubeka Saint Valentine, ke akabange esaba isebenze.
Lawa ama-movie ukuze ajabule kungase kube ngcono ukuba sibheke. Cinema - uhlale inganekwane, kwenza ukuzwelana emachawe ukukholelwa ukuthi yonke into kwenzekani ngempela.
Ake ubone ngeso lengqondo The Big elifingqiwe: ukubuyekezwa kanye kobufakazi. "Bearish" - ifilimu Adamu McKay
Nezikhathi Geological ngokulandelana kwezenzakalo. Umlando Geological Zomhlaba
Antitussive "samasiko-May": yokusetshenziswa, analogs kanye nokubuyekeza
Ibillillus emathunjini: isisusa sangaphandle sezwe langaphakathi